Markab dagaal iyo diyaarado oo duqeyn ku wado Kismaayo
Updated About:238 days ago 0
Duqeyn ayaa xiligaan ku socoto magaalada Kismaayo kuwaas oo ay la beegsanayaan maraakiib iyo diyaarado dagaal oo leedahay Dowlada Kenya.
Laba markab oo ku sugan xeebta magaalada Kismaayo ayaa duqeynta ku bilaabay magaalada kuwaas oo beegsaday dekada iyo xaafadaha u dhaw dhaw ee magaalada halkaas oo ay dadki joogay si weyn uga carareen.
Dadka ku harsan magaalada ayaa ku jiro xaalad jahwareer iyo cabsi waxaa intaasi sii dheer in laba diyaaradood oo ah kuwa miiga ay dhowr jeer ku wareegteen hawada magaalada kadibna ay bambaanooyin ku rideen garoonka diyaaradaha iyo xaafado ka mid ah magaalada.
Xarakada Al Shabab oo difaacyo badan ka xirtay magaalada ayaa la sheegay in ay madaafiic ka tuureen meelo u dhaw xeebta magaalada kuwaas oo ay isaga caabinayaan duqeynta kaga imaaneysa maraakiibta dagaalka.
Lama oga qasaaraha ka dhashay duqeymaha oo wali ka socda magaalada, balse waxaa soo baxaya warar sheegaya in dhaawacyo la dhigay isbitaalada magaalada.
Wixi kusoo kordha kala soco halkaan.